Xafladda Caleemo saarka Madaxda Hirshabeele oo ka socoto Jowhar – Radio Muqdisho
Xafladda Caleemo saarka Madaxda Hirshabeele oo ka socoto Jowhar
Waxaa goor dhow magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ka bilaabatay xafladda Caleemo saarka Madaxweynaha maamulka Cusub ee Hirshabeelle Cali C/laahi Cosoble.
Waxaa munaasabadda ka qeyb galay madaxda dalka, oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Xildhibaanno katirsan Baarlamaanka iyo sidoo kale Wasiiro kamid ah Xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa xafladda ka qeyb galaya oo halkaasi gaaray wakiilada Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Jaamacadda Carabta, IGAD iyo xubno kale oo ka socda caalamka.
Waxaa kaloo goob joog u ah xafladda madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo K/Galbeed C/kariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheakh Aadan.
Waxaad si toos ah uga daawan kartaa xafladda Telefeshinka Qaranka Soomaaliyeed SNTV, adigoo sidoo kale ka dhageysan kara Radio Muqdisho Codka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Puntland oo la kulmay xubnaha Aqalka Sare u metelaya “SAWIRRO”
Madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Puntland oo la kulmay xubnaha Aqalka Sare u metelaya "SAWIRRO"